KENYA oo Loogu baaqay iney Qaxootiga Soomaalida ah dib ugu celiso dalkooda | SAHAN ONLINE
KENYA oo Loogu baaqay iney Qaxootiga Soomaalida ah dib ugu celiso dalkooda
Xildhibaan Aden Barre Du’ale
Madaxweynaha dalka Kenya ayaa laga dalbaday in laga raro dalka qaxootida Soomaalida ee ku jira Xeryaha ka dib markii lasoo weriyey in Xeryaha Dhadhaab ay dadkaasi deganyihiin laga soo abaabulo weerarada Al-shabaab.
Hoggaamiyaasha arrintan soo Jeediyey oo gaarayey 12 hoggaamiye ayaa .waxaa horboodaya Aadan Barre Ducaale oo ah xildhibaan laga soo doorto magaalada Gaarisa ee dalka Kenya.
Xildhibaan Aadan Barre Ducaale ayaa xusay in la joogo wakhtigii Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ku dhawaaqi lahaa dib in loogu celiyo dalkooda Soomaalida ku jirta Xeryaha dalkaas.
Sidoo kale,wuxuu sheegay in kooxaha argagaxisada ah ay xeryahaas u Isticmaalaan goobo ay ku tababartaan isla markaana kasoo abuulaan weerarada ka geysanayan gudaha dalka kenya.
…….””Waxaan diyaar u nahay in wax laga bedelo sharciga dib u celinta qaxootiga, waxaana u sheegaynaa madaxweynaha in hoggaamiyeyaasaha gobolkan ay sai buuxda u taageerayaan qorshaha xukuumadda ee la dagaalanka kooxaha argagaxisda ah…….””ayuu yiri.
Guddoomiyaha Gaarisa Nadiif Jaamac ayaa isna sheegay Imaamyada masaajida magaalada in uu ugu baaqayo iney shacabka hor yimaadan ayna muujiyeen sida adag ay uga soo horjeedaan dhibaatooyinka Al-Shabaab.